ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအကြောင်း ( About Internal Revenue Department )
၁ ။ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနကို ၁၉၇၂ ခုနှစ် ‌အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်‌နေ့ တွင် အုပ်ချုပ်စနစ်သစ် ‌ဖော်ထုတ်‌ရေး အစီစဉ်အရ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် ။ ယခင်က တစ်သီးတစ်ခြား တည်ရှိခဲ့‌သော အမြတ်ခွန်ဌာန ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဌာန ၊ တံဆိပ်‌ခေါင်းခွန်ဌာန ၊ ‌အောင်ဘာ‌လေ သိန်းဆုဌာန ၊ ဆားခွန်ဌာန ၊ ယစ်မျိုးခွန်ဌာန ၊ အ‌ထွေ‌ထွေအုပ်ချုပ်‌ရေး ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာ‌တော်မင်းကြီးရုံးစသည့် ဌာနကြီးများမှတာ ဝန်ယူ‌ထောက်ခံ ခဲ့‌သော ပြည်တွင်းအခွန်အရပ်ရပ် စည်း ကြပ် ‌ကောက်ခံမှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဌာနတစ်ခုတည်းမှ ‌ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
၂ ။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် ၁-၁၀-၁၉၇၂ ရက်‌နေ့ မှ ၃၁-၃-၁၉၈၉ ရက်‌နေ့အထိ ‌အောက်‌ဖော်ပြပါ အခွန် ( ၁၀ ) မျိုးကို တာဝန်ယူ‌ကောက်ခံခဲ့ပါသည် ။
( က ) ယစ်မျိုးခွန် ၊
( ခ ) ကုန်စည်နှင့်ဝန်‌ဆောင်မှုခွန် ၊
( ဂ ) ‌အောင်ဘာ‌လေသိန်းဆုခွန် ၊
( ဃ ) တံဆိပ်‌ခေါင်းခွန် ၊
( င ) ဝင်‌ငွေခွန် ၊
( စ ) အမြတ်ခွန် ၊
( ဆ ) ‌မြေခွန် ၊
( ဇ ) ‌ရေခွန်နှင့် တာတမံခွန် ၊
( ဦ ) အင်းအိုင်ခွန် ၊
( ည ) ဓာတ်သတ္တုခွန် ၊
၃ ။ ယင်းသို့ ‌ကောက်ခံခဲ့ရာမှ အခွန်‌ကောက်စနစ် ပိုမိုထိ‌ရောက်‌ကောင်းမွန်‌စေရန် အတွက်‌အောက်‌ဖော်ပြပါ အခွန်အမျိုးအစားများ ‌ကောက်ခံသည့်တာဝန်ကို ၁-၄-၁၉၈၉ ရက်‌နေ့မှစ၍ ယှဉ်တွဲပါဦးစီးဌာနများသို့လွွှဲ‌ပြောင်း‌ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် ။
( က ) ယစ်မျိုးခွန် အ‌ထွေ‌ထွေအုပ်ချုပ်‌ရေးဦးစီးဌာန
( ခ ) ‌မြေခွန်
( ဂ ) ‌ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်
( ဃ ) ဓာတ်သတ္တုခွန်
( င ) အင်းအိုင်ခွန် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
၄ ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် ၁၉-၄-၁၉၈၉ မှ ယခုအချိန်အထိ ‌အောက်‌ဖော်ပြပါ အခွန် ၅ မျိုးကိုယှဉ်တွွှဲပါ ဥပ‌ဒေများအရ တာဝန်ယူ‌ကောက်ခံလျက်ရှိခဲ့ရာ ၃၁-၃-၂၀၁၁ ‌နေ့မှစ၍ အမြတ်ခွန်ဥပ‌ဒေကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး ကျန်အခွန် ( ၄ ) မျိုးကို တာဝန်ယူ‌ကောက်ခံလျက်ရှိပါသည် ။
( က ) ဝင်‌ငွေခွန် ( ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဝင်‌ငွေခွန်ပ‌ဒေ ) ၊
( ခ ) အမြတ်ခွန် ( ၁၉၇၆ ခုနှစ် အမြတ်ခွန်ဥပ‌ဒေ ) ၊ ( ရုပ်သိမ်းပြီး )
( ဂ ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ( ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ‌ဒေ ) ၊
( ဃ ) တံဆိပ်‌ခေါင်းခွန် ( ၁၈၇၀ ပြည့်နှစ် ရုံးခွန်အက်ဥပ‌ဒေနှင့် ၁၈၉၉ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်‌ခေါင်းအက်ဥပ‌ဒေ ) ၊
( င ) ‌အောင်ဘာ‌လေသိန်းဆုခွန် ( ဦးစီးဌာန၏ ညွွှန်ကြားချက်များ ) ။
၅ ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏အခွန်‌ကောက်စနစ်တွင်အခွန်‌ကောက် ( ၁၄ ) မျိုးပါဝင်သည့်အနက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူ‌ကောက်ခံလျက်ရှိသည့် အခွန် ( ၄ ) မျိုး ‌ကောက်ခံရရှိမှုမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်‌ကောက်ခံရရှိလျက်ရှိသဖြင့် ၁၉၉၅-၉၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အခွန်ရ‌ငွေစုစု‌ပေါင်း၏ ၇၆ ရာခိုင်နှုန်း ကိုပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ‌ကောက်ခံရရှိခဲ့ရာမှ၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အခွန်ရ‌ငွေ စုစု‌ပေါင်း၏ ၉၀ ရာခိုင်းနှုန်း‌ကျော် ကျပ်သန်း‌ပေါင်း ၂၇၁၀၉၀၆ အထိ ‌ကောက်ခံရရှိခဲ့ပါသည် ။
Annual Report for the Fiscal Year 2011-12
Taxes are needed to fund public expenditures like health, defense and transportation, as well as education and training to invest in our future generations.
The tax revenue isamajor source of funds for our government. There are 14 types of taxes and duties in our tax system. Internal Revenue Department collects more than 90 percent of total tax revenue every year.
Commercial Tax remains the largest source of tax revenue, accounting for 50% of IRD collection. It grew from 601.767 billion kyats in FY 2010-11
to 768.674 billion kyats in FY 2011-12. The increase was due to improvement of taxpayer compliance and effective cooperation with other departments.
Income Tax accounted for 46% of IRD collection. Collections increased from 571.331 billion kyats in FY 2010-11 to 711.142 billion kyats in FY
2011-12. The boost to public and private spending from Myanmar’s economic growth resulted in improved collection.
Stamp duty, which isaduty on documents, accounted for2% of IRD collection. Collections grew by 7.933 billion kyats to 37.405 billion kyats in FY 2011-12.
Lottery collections amounted to 20.348 billion kyats - about 1 % of IRD collections in FY 2011-12.